AROUND ZIM Archives - Zooming into Zhombe
Home NEWS Archive by category AROUND ZIM
February 20, 2019 128 0
Millers say Zimbabwe to run out of bread in one week as flour stocks dwindle
February 19, 2019 151 0
ZIMBABWE could run out of bread in a week after flour stocks dwindled due to the country’s failure to pay for imported wheat, according to a confidential letter written to bakers by the country’s grain millers’ group on Monday. The southern African nation is in the grip of a severe shortage of U.S. dollars that […]Continue Reading
CIVIL Aviation Authority chief executive officer David Chawota has been arrested on corruption allegations. A source with the National Prosecution Authority confirmed to Business Times that Chawota is facing a number of corruption allegations from radar, labour abuses to resurrecting contracts from 20 years ago that cost the Authority $ 450 000. Continue Reading
February 19, 2019 94 0
In a statement on Tuesday, Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi voiced his deepest regret over a tragic mine flooding accident in Zimbabwe, which has claimed the lives of tens of miners. He also offered sympathy to the government and nation of Zimbabwe, as well as the bereaved families of the victims. Heavy rains last […]Continue Reading
China has confidence in President Mnangagwa’s vision 2030
February 19, 2019 83 0
ADDRESSING delegates at the 2019 Chinese Spring Festival gala in Harare on Sunday night, Acting Chinese Ambassador to Zimbabwe Mr Zhao Baogang — who is also the Charge d’Affaires at the embassy — said Zimbabwe will surmount the problems it faced. He predicted that the country would achieve President Mnangagwa’s vision of transforming Zimbabwe into an upper […]Continue Reading